Ubuhle nempilo Ukunakekelwa komzimba
I-Pantas yizona ezincane ezinamahlombe ezinyamazane, eziqedwa minyaka yonke futhi zisetshenziselwa izinjongo zokwelapha. Kumele kuqashelwe ukuthi lezi zilwane zikhula minyaka yonke ziphonsa izimpondo, ngoba ukulimala okungenakuqhathaniswa empilweni yabo ekuqoqweni izinto zokusetshenziswa akusetshenzisiwe. I-panto iqukethe ama-amino acids angu-18 kanye negazi le-maral, elinempilo yokuphulukisa. Ikakhulukazi ethandwa kakhulu emithini engeyona yendabuko idla izibhakabhaka, ezilungiselelwe ngesisekelo samacembe kanye namakhambi okugula.
Izinzuzo zokugeza okugeza
Inqubo ikwandisa umkhuhlane futhi inciphise inqubo yokuguga. Emazweni aseMpumalanga, i-pantas ikhonjwe ngokuhambisana nomsuka we-ginseng: kokubili kubhekwa njengama-adaptogens anamandla kakhulu.
Amabhati akhipha ukukhathala okungapheli, anikeze icala lokuphila, uphilise amanxeba, avumele ukulala, ukukhulisa ukusebenza kwengqondo nomzimba komuntu.
Amanzi okugeza angathathwa ekhaya, afaka amanzi ku-powder uphondo lwama-maral, kuyilapho ezindaweni zokuhlala zaseKazakhstan izinqubo zenziwa ngokusebenzisa izinto ezintsha eziluhlaza.
Izinkomba zokugeza kwamathambo
Ezokwelapha zendabuko, njengokwesezela ekwelashweni kwezidakamizwa, ukugeza kubhalwe ukuthi:
I-1 degree ye-high blood pressure;
ukungabi namandla okwehla;
i-dystonia yemifino ye-vegetative ;
i-bronchitis ne-asthma ye-bronchial;
ubuthi ngezinsimbi ezinzima.
Ezinsini zokubeletha, ukwelashwa ngamabhati okugcoba kuboniswa ukubeletha kwesifo sofuba, ukungabikho komzimba, ukuyeka esikhathini. Izinqubo zamadoda ngokusebenzisa uphondo lwezinyamazane zisiza nge-prostatitis. Ukusetshenziswa kwalokhu okubonakalayo ekukhatheni i-osteochondrosis, i-rheumatism, nokulwa nemiphumela yezinsalela kubaluleke kakhulu.
Amaphakatsi asiza ukulwa nezifo zesikhumba:
Kumele kuqashelwe ukuthi ukugeza kungathathwa kuphela esigabeni sokuxoxwa: uma lesi sifo siphuthumayo, izindawo zokuphulukisa zophondo lwe-maral zingalimaza.
Izinkomba zokuthola amanzi okugeza
Ngaphambi kokuba uthathe amabhati okugeza, kufanele uthole imvume yodokotela (uma uhlala eholidini awungekho esiqondisweni sakhe). Kuzodingeka ukubambezeleka izinqubo ngeziguli ezikhulelwe, kanye nabantu abanokukhubazeka kwemithi yokwelapha.
Musa ukugeza uma:
i-hypertension 3 degrees;
umonakalo omkhulu wesikhumba;
I-Cream ye-nail ukhunta
Ulwandle usawoti ngezipikili
Usayizi wesifuba wesibili
Amaphilisi wokushisa ilanga
I-LPG massage - konke okudingeka ukwazi mayelana nenqubo ehlukile
Ungasusa kanjani ngokushesha i-cellulite?
Umzimba we-Sugar uhlasele ngezandla zakho - zokupheka
Ungasusa kanjani i-cellulite kusuka emadokeni?
Isibuko se-nail si-polish
Yini okufanele ugqoke ngoNyaka Omusha 2013?
I-Caripazim - ukwelashwa kokushisa
Indlela yokufunda ezithombeni?
I-Sultan Suryansiyah Mosque
Indlela yokupheka ama-pancakes ngesoseji sesibindi?
Kungani ingane ilele ngamehlo avulekile?
Isevisi yezinkonzo ezitimeleni
I-sofa yezinga elibili
Ukuzenzela imfashini - entwasahlobo-ehlobo 2014
Ihabhinethi yamahhashi emgodini
Izidumbu ezingu-15 ezishiye inhlanhla
Ukukhishwa ngemuva kwe-biopsy yomlomo wesibeletho
Izigaba ze-cirrhosis zesibindi
I-Humus ilungile futhi imbi
Indlela yokufundisa ingane ukugibela ibhayisikili elinamasondo amabili?
U-Sylvester Stallone akazange amukele i-Oscar eyilinde isikhathi eside
Izitayela ezisheshayo zezinwele eziphakathi
I-cardigan eyaziwa yowesifazane